Akhriso: Nuxurka Khudbadihii ugu muhiimsanaa ee maanta lagu soo qaaday shirka Maamul Goboleedyada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Akhriso: Nuxurka Khudbadihii ugu muhiimsanaa ee maanta lagu soo qaaday shirka Maamul Goboleedyada
Waxaa goordhow la soo gabagabeeyey wejiga hore ee shirka dowlad goboleedyada uga socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug iyada oo ay ka hadleen dhammaan madaxweyneyaasha, waxaana idin soo gudbineynaa nuxurka qodobadii ay soo hadal qaadeen.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo martigeliyey shirka dowlad goboleedyada oo furay shirka ayaa mahadcelin u jeediyey inta ka soo qeybgashay iyo inta gacan ka geysatay isaga oo intaa raaciyey inuu yahay mid wadatashi ah, una mahadceliyey Soomaalida iyo beesha caalamka.
Mar uu ka hadlayey federaalka ah waxaa uu yiri “Federaal ma aha wax dadka kala geynaya, ama horumarkiisa, waa shaqada oo la kala qeybsaday, kala qeysanaan waa wax is kabaya.
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo isna goobta ka hadlay dastuurka isaga oo sheegay inuu yahay shey ka dhashay colaadda iyo kala shakiga dalka ka dhacday isaga oo intaa raaciyey in ay tahay in il naxariis ah, niyo wanaag ah lagu fiiryo, oo il hooyo lagu fiiriyo oo aan il eeddo lagu fiirin.
Waxaa uu beesha caalamka ugu baaqay iney taageero la duljoogto waxa lagu heshiiyo, waxaa uu taageeray in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo
Akhriso: Nuxurka Khudbadihii ugu muhiimsanaa ee maanta lagu soo qaaday shirka Maamul Goboleedyada was last modified: July 11th, 2020 by Admin
Itoobiya iyo Sudan oo guddi u saaray xalinta xiisad ka dhalatay askari la dilay